Soso-kevitra fanampin-tsakafon-jaza 6 volana
Manomboka eo amin’ny fahaenim-bolana dia efa afaka mihinana fanampin-tsakafo ny zaza.
Firy taona no tokony hiborosy nify ny zazakely ?
Raha ny tatitry ny OMS, dia manana olana eo amin’ny nify avokoa ny 60% hatramin’ny 90%-n’ireo ankizy any amin’ny kilasy garabola.
Miaro ny zaza amin’ny hatsiaka
Efa tena mangatsiaka ny andro. Fotoana izay mora hahazoan’ny zaza ireo aretina vokatry ny hatsiaka toy ny kohaka, ny fanaviana, ny gripa,…
Miaro ny nifin’ny zaza tsy ho simba
Fahazarana kely fotsiny dia efa manampy betsaka amin’ny fahasalaman’ny nifin’ny ankizy dieny mbola kely izy. Manomboka any amin’ny fikolokoloana ny hihy izany ary manaraka ho azy ny nify. Ireto ary misy fihetsika kely tsy mandany fotoana afaka hanadiovana ny ati-vavan’ny zaza izay ampahafantarina antsika.
Neny manjakely Izay mikarakara tarehy dia atao volo maimaim-poana…
Tena ilain’i neny ny mikarakara endrika taorian’izay fihibohana izay, fa eo koa ny fidirantsika amin’ny ririnina. Araka ny fanadihadiana nataonay teny amin’ny Charm’Elle Beauté dia tokony hanao
Andron'ny ray aman-dreny Nankalazaina ny 1 jona teo
Volana natokana ho an'ny ankizy ny volana jona. Efa aman-taonany no nanamarihina izany teto Madagasikara. Tsy voaresaka loatra kosa ny andro natokana ho an'ny ray aman-dReny izay ankalazaina isaky ny 1 jona.
Fetin'ny reny : Hisy Reny sahirana omena mofomamy
Renim-pianakaviana iray monina any Toamasina no manam-pikasana hizara mofomamy ho an'ireo reny tsy manan-kialofana sy ny zanaky ny lalana eny amoron-dranomasina ao an-tampon-tananan'i Toamasina amin'ny alahady izao noho ny maha andro hanamarihina ny fetin'ny reny io andro io.
Ronono velona: raha ny voka-pikarohana nataon’ireto manam-pahaizana ireto dia saika ny fisotroana ity zava-pisotro ity no iraisan’ireo ankizy manana toe-batana mifanaraka amin’ny taonany, izany hoe : tsy ngeza loatra na matavy loatra. Eo ihany koa ny otrik’aina izay entiny amin’ny vatana. Mihoatra amin’ireo karazana ronono hafa dia nanambara izy ireo fa manodidina 40% eo ny mety tsy mampatavy ny ankizy amin’ny fisotroana azy ity.
Matetika ny ankizy zatra misotro ronono velona dia saika tsy mora noana sy tsy tia tsakotsako loatra noho ny ankizy tsy misotro ronono.
Manomboka eo amin’ny faha 2 taona dia efa afaka misotro ronono velona ny zaza raha tsy manana olana ara-pahasalamana.
Ny akora mandrafitra ny ronono
Ny 88%-n’ ny akora mandrafitra ny ronono velona dia saika rano avokoa. Ankoatra izay dia ahitana otrikaina toy ny glucides (43%) sy lactose ihany koa izy. Ity siramamy disaccharide ity no singa matevina lehibe ao anaty ronono ary mety miteraka.
Ny hery entin’ny ronono amin’ny vatana
Ny ronono velona dia mitondra calcium, magnesium ary phosphore. Misy otrikaina koa (B2, B12, A, D, E…). Ny pH dia somary “acide” kely: eo anelanelan'ny 6,4 ka hatramin'ny 6.8.